rap & Diinta — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waayo, inta aan xusuusan karo, hip hop uu jaceeylka ah Ilaah iyo Diinta. Waxaan ula jeedaa ha soo jeedinaya in dhammaan heesaa waa Addomahaaga diinta. Laakiin heesaa yar - ama wax fanaaniinta waayo, xaalkan in - gariirin karin rabitaanka inay Ilaah ka mid ah meel ay tahay. Waa dabiiciga ah iyo inoo wanaagsan inaynu hadli ku saabsan Ilaah, laakiin su'aashu waxay tahay, waxa aan ku yidhaahdeen? Qaar ka mid ah odhan doonaa,, "Waxa kaliya music. Ha u qaadan si dhab ah!” Laakiin waxa la sheegay in heesaa on codbaahiyaha waa ka sii daran ka badan aad u malaynayso in.
Qaar ka mid ah ayaa loo isticmaalaa hip hop ay u muujiyaan in ay aaminsan yihiin diinta u kali ama ka maqan oo dhanba. Islam, The Five Percenters, Masiixiyada, ee shakiga, mulxidnimo, iyo diimaha kale ayaa lagu dalacsiiyay dhex foomka farshaxanka. Waxaan qabaa hip hop waa gaar ah ku habboon si ay u muujiyaan daacadnimada iyo saa'ixiinta ah wax aynu ku jirno dareen ku saabsan. Qayb ahaan sababtoo ah rawness kalifaya dhaqanka ee qaarkeedna maxaa yeelay, hip hop u oggolaanaysa in erayada dheeraad ah, sidaas aad si dhab ah "baraan karaan.”
Laakiin inta badan hop waqti misigta badan yahay sida tima jare badan class Sunday School a. Heesaa dayasho ordi off afka, in ay ogaadaan waxa ay ka hadlayaan ama ma.
daacadda vs. iska tuurnimo
Waxaa jira qaar ka mid ah kuwaas oo ka tarjumaya heesaha aan labaweji lahayn - search for iyo halgan Xaq - in kastoo mararka qaar Dhunsanyihiin. Waxaan ixtiraamaan in. Mid ka mid ah u maleeyo of "Ilaah Gacaliye The Roots '2.0,” ama Kendrick Lamar ee "u le'anayaan harraad”.” *Xitaa markii aan la fikrado ama gunaanad ku raacsanayn, Waxaan ku raaxaystaan ​​dhagaysto warwareeggayga naseexeeyaan. Oo waxaa inta badan igu guuro si ay u tukadaan emcees aan la shaqayn.
hop Hip ayaa had iyo jeer lahaa koox madow in kastoo, halkaas oo fanaaniinta Ilaah iyo Diinta kula dhaqmo si ixtiraam iyo ixtiraam. Heesaa u muuqdaan in ay dhihi wax kasta oo erayada dareemaan xaq in la joogo - haddii ay dhab ahaan rumaysan ama ma. Oo ah "post-Christian” quruun sida kuweenna, kuwaas oo weerar taxadar la'aan waxaa sida caadiga ah loogu talagalay Ciise iyo kaniisadda.
Dabcan, waxaa jira waxyaabo qaar ka mid ah - sida labawejiilenimo iyo lacag gaajaysan "wacyigaliyo” - In ay u qalmaan inay ku kajamaan. Laakiin nasiib, Kitaabka Quduuska ah, kaniisadda, oo Ilaah xaggiisa waxaa badanaa lagu daaweeyaa sida characters Fudud ee sheeko khayaali ah. waxaan qirayaa, heesaa maqalka ka hadlaan "Odayaasha Dahaqanka” gabdhaha heesta kiniisadda i dhiibi, laakiin waxba i walbahaarin ka badan Ciise wuxuu naftiisa ku majaajiloodeen,.
heesaa badan ayaa naftooda Ilaah ugu yeedhay, isku heer ah Ciise, oo Kibir qaaday magaca Rabbiga waxtarla'aan. Waxay albums oo dhan dhisay hareeraha mawduucyada diinta aan ixtiraamin. Waxay isticmaalaa in ay hal-abuurka Ilaah siiyey inay caayaysaa ay wax abuura. Sidee kajan ah.
Sida raacsane ah ee Ciise, Shakhsi ahaan ayaan u xumaadeen by wixii aan maqlo, laakiin in ka badan in aan ahay ka cabsan, waayo, kuwa erayadan caayaya qubmaysa. Waxaan oo dhan u noqon lahaa ka baqin, waayo, nin aan lahaa candhuufo wejiga Madaxweynaha, laakiin waxaan noqon waa ka sii cabsan, waayo, nin aan ku candhuufo wejiga Ilaaha Qaadirka ah Ilaah.
Wax ka qabashada Iyadoo Grace
Sidaas sidee baan uga jawaabaan? Waxaan bilaabayaa yaabaa olole si ay qaadacaan oo ay music. Or, sida heesaa nafsaddayda, Waxaan qori kartaa rikoor hoyatay culus loogu talagalay da 'ah. Waxaan ha doonaa in aad go'aansatid hadii mid ka mid ah wajiyada kuwa midigta ama khaldan yihiin. Laakiin daacad ah, Uma maleynayo badan ay samayn lahayd si wax looga qabto dhibaatada dhabta ah.
music The heesaa, kuwaas oo sii daayo waa laga fekerayo ah oo Quluubtooda. erayada Our mar walba waa sawir kaamil ah waxa ka socda gudaha oo naga mid ah. Ma waxaad abid qalad halka haysta hal galaas oo biyo ah ama casiir? Wax kasta oo aad qabto in muraayadda daadinta baxay gal dhulka. Sida aynu wada ognahay, our qadan ma keento dareeraha, waxa kaliya noo muujinaysaa waxa in muraayadda. Waa wax la mid ah la hadalkayaga. Marka aynu ka hadalno, ama raabka, content ee qalbigayaga waa daadinta baxay. Hadalka iyo music ma noo dembi miidhan, laakiin waxa aanu soo bandhigaan waxa ku jira quluubta iyo maskaxda noo (Matthew 12:34).
In light of in, dhageysto qaar ka mid ah heesaa ah oo uu kor u qaado mawduucyada diinta ii sheegayaa laba wax.
First, ay fahmi waayaan Ciise kan. Haddii ay yeeleen, weligoodna ma hadli lahaa isaga jidka this. Dabcan, waxay ogaan Ciise wuxuu ahaa nin Yuhuudi ah kan iskutallaabta lagu qodbay laba kun oo sano ka hor. Laakiin, iyagu ma dhab ah isaga fahmo.
Ma jiro nin, ama naag in maskaxdiisu isku dayi lahaa in aan isku heer ah la Qaadirka waadaxa haddii ay si dhab ah isaga la fahamsan yahay inay sida. Qofna isaga Ixtiraamdarro lahaa by isaga wadaajiseen falalka galmada sharka ama rabshad hadii ay fahamsan yahay in uu ahaa xaakinka weligeed ah ee naftooda. Iyagu ma ay u rogrogmadaan lahaa magiciisa ku xeeran sida uu qofna ah oo Magaciisa lagu daweeyo la eego loogana ixtiraam sida.
Marka aad si dhab ah Ciise arkay, in aad fahanto in uu ka daran yahay. Marka aad si dhab ah u ogaadaan Boqorka, waxaad soo gudbin si uu amar, uma baahnid inaad u doodid. Sidaas gunaanaday kaliya ee aan sawiri kartaa waa in aanay isaga arkay qofka uu yahay.
labaad, waxaan u baahan nahay dadka ognahay Ciise in ay kor u hadlaan. Ma aha oo kaliya in songs iyo posts blog, laakiin miiska cashada, in shaqada agaasime ee, iyo fasalka dhexdiisa. maxaad? Maxaa yeelay, Jaahil ah iyo ixtiraam this aan gaar u tahay heesaa. farshaxanka kalsoon yahay kaliya hal ra'yi waxaa ka mid ah. Waxaan ku noolnahay dhaqan tiray si dhab ah (2 Corinthians 4:4).
Furitaanka Indhaha Blind
Sidaas darteed haddii aad og tahay Ciise, runta sheeg saaxiibadaa iyo qoyskaaga. Ilaah ma aha in la fashilmay. Waxa uu la caabudo, jeclaaday, addeecin, oo ku riyaaqay. Waa dhab ah. Waxa uu neceb yahay dembiga iyo Wiilkiisa inay sameeyaan iska leh diray. Dhab ahaan, Wiilkiisa dhintay oo qaaday ciqaabta dembiga aawadiis, sidaasi darteed ma lahaa leeyihiin in ay. Oo Ilaah isaga ka sara kiciyey ka qabriga si aan isaga kula weligiis wuu noolaan kari waayeen.
Gudub injiilkan on dadka kale! Laakiin fadlan, sidaa sameeyaan nimco. Jooji kugu qeyliyaa, dadka, iyo bilaabaan iyaga jecel. Haddii aad soo arkay Ciise, waayo, kii uu yahay, ma ahan sababtoo ah waxaad ka khayr badan cid tahay. Waa sababta oo ah Ilaah aad indhaha la 'indhaha u furay. Tukada uu sidaas oo kale samayn lahaa saaxiibadaa iyo qoyskaaga.
Oo haddii aadan aqoon Ciise, waa inaad heshaa inaad isaga ogaato. Waxa uu indhaindhaynta wanaagsan, iyo in ka badan mid istaahila in aannu u kaliyeeli. Ma jiraan wax hal ka mid ah oo naga mid ah in awoodin in Ilaah iska indha ama daweeyo Wiilkiisa sida kaliya dude kale. Our daa'in ku taagnaa waxa aan rumaysan nahay ee ku saabsan Ciise. Xaqiiqaduna waxay tahay, haddii aannu rumaysan isaga ama ma, aan lagu xukumi doonaa isaga.
Sidaas waxa Ilaah uu si gaalnimo ah waxaad codsan? abuuraha, Raasiq, iyo Judge. Oo haddii aan u leexano doonaa, rumeeyana - Badbaadiye.
*Afeef: Ma talineynaa in aad u dhagaystaan ​​heesaha kor ku xusan. Mid ka mid ah iyaga ka mid ah waxa ku jira af qalad in ma noqon doonto haboon ama waxtar u badan.
Abe • August 19, 2013 at 9:55 waxaan ahay • Reply
“Waxaan oo dhan u noqon lahaa ka cabsan nin lahaa wejiga kaga candhuufeen oo ka mid ah
Madaxweynaha, laakiin waa inaan u sii baqay, waayo, nin aan ku candhuufo wejiga Ilaaha Qaadirka ah Ilaah.” – xukumay in uu yahay mid aad u xoog badan!
Waad ku mahadsan tahay Trip this article! Xaqiiqdii waan ku riyaaqaa Christian hip hop, maxaa yeelay, mar kasta waxaan dareemay in lyrically waxay lahayd content sii badan iyo cilmiga badan sida caadiga ah music CCM ammaantaada.
Waxaase xusid mudan, Weligay ma aan jeclaan Hop Hip cilmaani ah sababta oo ah soo noqnoqda, content si joogto ah lyrical of galmada, daroogada, is nasihi, iwm. Taasi ayaa run xitaa ka hor inta aan Christian noqday.
Dhab ahaan, Waxaan ku soo koray dhagaysto Punk ayaa dhagaxayga weyn iyo had iyo jeer ahaa rookaha ah. Markii aan helay Christian Hop Hip, Waxaan u jeclaaday! Saaxiibbaday way ahaayeen haatisa in aan dhagaysto Hop Hip tan iyo markii aan mar walba way Nacayeen, ugu yaraan Hop Hip cilmaani.
Hay samayn shuqulkii weynaa oo aan aad u walaalkay doonaan! Waayo, ammaanta Ilaah iyo nabigeena Badbaadiyeheenna Ciise! :D
Avery • August 19, 2013 at 9:56 waxaan ahay • Reply
CherishJesusLuv • August 20, 2013 at 5:47 waxaan ahay • Reply
Anigu waxaan oggolahay inaan ka baxay, waxa qalbiga ku badan ee afku wuxuu ku hadlaa, si dabiici ah erayada si songs waxaa ay noqon doontaa ah oo ku saabsan Dhadkan socday in qofka.
sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in aad ku darto in kuwii gabayaaga badan Country sidoo hadlaan Ciise sida mid ka mid ah qaar ka mid ah ay la cabbo? Ummm haa xaq haddii ay aragtay isaga, waxay noqon lahayd oo khushuucsan oo ma u malayn badan oo ku saabsan la cabbo. Ama isku dayi lahaa si ay u qariyaan hortiisa ka.
Waxaan jeclaan lahaa in ay wadaagaan on halkan iyo in aan loo yeedhay inuu la hadlo dadka uu Love. Ruuxiisa ii sheegay in uu hadli lahaa igu tuuray dadka. Anigu ma kaamil ah, aniga iyo waxaan isku dayi in ay sii joogaan layska dhawro wasakhda dunida, oo waxaan sii kordhaya oo kale Masiixiyiinta kale.
Waxaan doonayay inaan qaar ka mid ah maraggaygu wanaagga Ilaah kula wadaagi naftayda u gaar ah.
Waxaan mar walba dareemayay inaan dareemi karo xataa Ilaah ii daawashada sida dhallinyarada ah. Anigu waxaan ka gabyi lahaa isaga iyo lumaan maalintii fekerayo jacaylkiisa. Markii aan ahaa 15 Sayidka Rabbiga ahu wuxuu macno ii Daadiyey jacaylkiisa iyo Ruuxa iyo maalintaas waxaan heleen Ruuxa Quduuska ah. Afkayga waxa loo adeegsaday Ruuxa inay ka jawaabaan su'aalaha ay ahayd on dadka kale ee qalbiyada qolka. Oo markuu ila hadlay ayaa ku tuureen qalbigaygu ii sheegin Wuxuu u yimid ayaa ku nool igu jira oo ii ilaalin lahaa iyo hadli lahaa igu tuuray markii ugu markii ay ahayd xaq u. Waxaan xusuustaa markii aan fasalka 9aad iyo dadkan ula yimaadeen tanaga qashinka ka buuxa cinjirka galmada si ay dugsiga. Robert E. Lee in Tyler TX. Waxay na tuseen sawiro badan oo deceases in galmo keeni lahaa. Waxay noo sheegeen in la buuxiyo si xor ah u dhammaystiraan, bacda qashinka brown yar oo ah cinjirka galmada oo intay qaataan ayay haddii aan loo baahan yahay. Waxay noo sheegeen in aan xafiiska kalkaaliyeyaasha tegi karin oo sidoo kale ka heli qaar ka mid ah haddii aan ma doonayaan in ay xaq u leeyihiin ka dibna u qaadan. Markay dheheen,”Sex waa buux ugu wanaagsan in aad weligaa ka buuxin doonaa.” Ayaan u istaagay in-hore ee fasalka fasalka 9aad oo dhan iyo dadkan oo wuxuu naadiyey. “Ruuxa Quduuska No Ilaah waa waxa ugu wanaagsan adiga iyo waxaan ka buuxin doonaa weligiisba.” Waxay lahaa booliska igu meeluu xafiiska ilaa iyo ka dib waxaa ku daateen waxay dhammeeyey. Waxaan xusuustaa ardayda istaagay weheliyaan ila oo wuxuu ku yidhi, iyadu waa xaq. Tani waxa ay ahayd bilowgii ambabbixisaan.
Later on in Life aan joogay guri dabaq ah oo halkaas waxaa yiil la cabo iyo ciyaaraha card. Waxaan xusuustaa Waxaan dareemayay inaan loo baahan yahay in meesha this dareen this i dabooshay qalbigayga carari. Waxaan ogaaday nin on mashiinka karaoke ah ay bilaabeen in ay magacayga idinku leeyahay iyo wax ila hadlay oo ku saabsan in Anigu ma aan aqoonin sida uu garan kari waayay. Waxaan daawaday iyo ogaaday Waan arki karaa gees oo madaxiisa ka soo baxaya, waxaan weydiiyay saaxiibkay haddii ay arki karin waxa uu sidoo kale ka dhacaya, ayay ku jawaabay ma, laakiin in ay dareemeen walwalsan ah oo ku saabsan waxaa inoo isagoo. Waan ogaa waxaan arkay wax ruuxiga ah ka dibna ka dhacaya. Waxaan arkay wax ka badan mandiil ilkaha fiiqan iyo iyo qoobab, iyo barta aan ku soo orday inuu albaabka looga baxo. Ninka on mashiinka karaoke yeedhay dumarka ah in ay xirto albaabka aniga iyo ma ha iiga tegin, iyadu ma uu karin inuu oo uu soo dhaqsaday inay albaabka oo wuxuu istaagay-hore ee albaabka gudaha ii dhow. Waxaan ku jiray naxdinta oo dhamaystiran waxa dhacay. Waxaan arkay jinnigii Caaasimadda suurto gal yimaadeen qeybtii ninka ka baxo, sida haddii si sax ah waxaa i wada laasta, oo la joogo in la ded cad oo qurux badan u soo degay badan aan jirka oo dhan iyo dumaya jinnigii ka jirka Mans this duulay. Ninka way taagnaan kari waayeen oo hoos kubad illinka ka soo gelin meel fadhiya oo waxaan arkay ilmada u qulqusho, oo wejigiisuna. ka dibna waxaan awooday in la furo albaabka xitaa la ninkan fadhiyey-hore sida ugu fudud ee haddii uu lama halkaasay wada fadhiyeen, oo waxay bilaabeen inay u ordaan sida ugu dhakhsaha badan aan awoodo ka mid ah guryaha this.
Waxaan markan waxaan dareemay sida haddii aan loo baahan yahay in la raaco aan is dadka oo dhan ee aan nolosheyda in xitaa ka fiirsan doono inuu igu rido qol leh dadkii la jiray oo jinnigii hantiyeen. Oo sidaas daraaddeed waxaan u diriray aan jidka ka burcadda iyo saameynta xun iska. Anigu ma aan runtii noloshayda oo dhan inay Ilaah siin markan oo jeclaan lahaa in lagu daro weli waxaan ahay tababarka in this sidoo kale goobta. Laakiin Ilaah si la ii badbaadiyo sidan inkasta oo aan ahaa dhalinyaro ah oo u baahan naxariis aad u badan iyo nimcadiisa, weli baffles maankayga ilaa maantadan la joogo. Jacaylkiisa waa la yaabka leh. Waxaan la kulmeen kaliya hal ruux kale oo jinka oo aan ruuxa arki karin. waxaa aan hoos wadidda hwy ah 155 oo waxaan ogaaday saxan gaariga ayaa sheegay in a “Dadqalato” waxa on, oo aan gaariga aan eegay darawalka iyo xaq halkaas wuxuu ku arkay Jinni ee jirka Mans ah. Waan ku soo dedejiyo si aad u hesho on hoos wadada ka this mid iska.
Tusaale kale oo Protection Ilaah naftayda. Markii aan yaraa markii qaar ka mid ah ka dib markii aan Ruuxa Quduuska ah helay waxaan la fuushan dhamaadka dambe ee gaari xamuul ah soo qaado in Louisiana iyo waxa oo dhan aniga iyo saddex ilma adeer ahaa mid aad u yar yar ee dhabarka iyo saddex adeer hore. Waxaan dareemay ruuxii i soo guurto gabyi uu leeyahay dunida oo dhan gacmihiisa, Oo waxaan istaagay gacmahayga Ilaah ka sara kiciyey. Waqtigan xaadirka ah in sida ilmo adeer aan dhabarka i doonaysaan at jeclaan maxaa ayay gabyaya in, adeerkay kuwaas oo ahaa marayay gaari to our midig, waxaana ku jira qalooca ah iyo gaari xamuul ah oo ay ahayd in haadka ka hor soo socda si toos ah on. My adeer, kuwaas oo ahaa ayuu yiri, “Ilaah Gacaliye maxaan sameeyey.” iyo ina adeerkiis kale oo hore ayaa sheegay in, “Ilaahayow.” waxa kaliya oo aan ahaa kor u gacmahayga Ilaah iyo gabay,. Waxaan arkay daruur roob-u sujuuday qurux badan gacanta xarriiq soo degay dumaya iyo saaro gaari xamuul ah in uu ahaa madaxa on isku nala. Waxaan xasuustaa inaan arkay gaari ay inaga dambeeya on hoos wadada sida haddii aan waxba dhacay. Marka aynu dib u helay inay Abtiyadaa gurigeyga adeer aan sheegay, “Waxaan oo dhan u noqon lahaa dhintay haddii aan lahaa ay xumme tahay in la gaari xamuul ah.” waxay i weydiiyay waxa aan halkaas dib ugu sameeyey oo waxaan idhi weriyo gabay helay dunida oo dhan gacmihiisa. My adeer iyo waxaan weli ku jira ka baqaa Ilaah, waayo, maalintaas ilaalinta oo dhan oo naga mid ah. Waxaan iyagii u sheegay waxa aan ahaa “i” laakiin “Ilaah” kuwaas oo noo ilaaliyo.
Tani waa uun laba jeer ka badan oo Ilaahna wuxuu igu ilaaliyo, naxariistay aniga iyo iga celisay waxyeello.
Iyada oo yidhi oo dhan waxaan rajeynayaa in this dhiiri qof halkaas, iyo Ciise jecel ma aha oo kaliya ku saabsan “Maxaa yeelay,” wax dhici waayo, garan Qorniinku wuxuu leeyahay, Waxaa barakaysan ninkii aan arkay oo weli weli aaminsan in. Iyo in uu yahay oo kaliya qayb ka mid ah, Qorniinku in fyi. Anyways waxaan rabay in this wadaagaan oo waxaad ku tidhaahdaa I Love Ciise, Waxaan aaminsanahay oo ku markhaati fura in uu ilaalin,naxariis, iyo Love. Waxaan doonayaa in aan qof walba in uu ogaado our King ayaa arooska wuxuu isku diyaarinaya juwuu Jecelyahay a. Waxaan sida uu Church waa uu jecel yahay iyo tan uu doonayaa aniga iyo adiga iyo qof kasta oo reading this inay isu diyaariyaan oo uu soo muuqday, iyo in ay toobad keenaan oo dembiyadiinna oo halkaas isaga raaca. I Love aad music Trip. Waxa uu u barakeeyey nolosha iyo kuwa kale igu wareegsanaa. Waxaan kuugu duceeyaa inaad sii wadi doonaa in rid Matt 6:33 dhaqan iyo nolol markhaati u our wanaag Kings. Waxaan ahay si shukriya garaaca wanaagsan, isagoo Ilaah la erayadii jecel in aniga iyo qoyskayga yar yar ku raaxaysan karaan sida aan sugi korkiisa. xumme :) ANIGU WAXAAN AHAY UNASHAMED!
Matthew 6:33 Laakiin horta doondoona boqortooyadii Ilaah, iyo xaqnimadiisa; oo waxaas oo dhan waa laydiinku dari doonaa.
MIMSHACH NADIIF • August 19, 2013 at 9:57 waxaan ahay • Reply
Ka hadal heesaa this . Oo isna wuxuu lahaa a “Ciise Socon” aragga in industry Hip-hop sida aad qabto, laakiin waxa ku dhacay? “guuldareystay” haddii aad sidaas si la hadasho. Maxaa ka iisheen?…Kuwani waa su'aalaha aad u baahan tahay si aad u hesho jawaabaha.
Fadhiga iyo dib u falanqeeyo Maxaa ku dhacaya Ciise “image” nagama bedeli wax. Sida arrin xaqiiqada in iyocadhadii bedeli Ciise’ CIISE!!.
Isaga iskutallaabta lagu qodbay by farabadan qaar ka mid ah askarta Romans raqiis ah iyo in xitaa keentay in ay caddeeyaan in uu Ciise yahay Ilaah wuxuu Resurrecting.
Tag hesho heshiis rikoor ka YMCMB iyo wacdiyaan Xaq hab cayriin, oo bal eega, haddii aad ku noolaan doonaa sida heesaa ah.”dhihi waxa dunida doonayo in uu maqlo” ganacsiga…smh
Waxay sidaas u isticmaalaan in ay dunida iyo waxa hababka: Helitaanka lacag, fornicating, iwm. u kordhiyo in xitaa haddii jidh ahaan maanta Ciise wuxuu naftiisa ku filleyn inuu waxkaste, ay isag oo ay simbiriirixan doonto dib u jiraan siyaabo jir ah galay ka dib.
“Waxaad si sahlan u burburin kara geed waxa at dabiibayo stage laakiin ma aha marka uu si buuxda u aasaasay sidii Timber ah.” iyo habka kaliya ee ay uga takhalusi Timber a gebi ahaanba waa ay baabbi'in xidid.
Sidaas sameeyo waxa aad waajibka ku ah inay sameeyaan in la burburiyo asalka u ah dhibaatada sida a “badbaadiyey” isagoo. dunida waxa ay maqlin sheeg.. caddayn A wax Ciise’ jiritaanka, Power nasaha “iftiinka cusub”
Nicholas J. Gausling • August 19, 2013 at 9:58 waxaan ahay • Reply
Qaar ka mid ah saaxiibada anigaa of dhawaan uga hadashay in sida ugu wanaagsan ee been aqoonsan yahay by barashada inay aqoonsadeen oo xaqa ah; Waxaan qabaa in xigmaddu ay halkan khuseysaa. Mid ka mid tegi karin oo ku saabsan abuurista olole ka dhan ah tan music cibaadalaawe, laakiin xataa si fiican waa in saara music Ilaah xuddun.
Waxaan inta badan taageerayaasha raabka ah ma ihi aniga qudhaydu, laakiinse anigu waxaan ahay wayn ugu mahad celinayaa in ay jiraan shaqsiyaad sida naftaada kuwaas oo u adeegaya sida nooc ka mid ah adeegayaasha wadaniga ah iyo gaarey dhaqanka in la jacaylka Masiixa.
Avery • August 19, 2013 at 9:58 waxaan ahay • Reply
cabsado An, perspecitve si fiican u maleeyay in-baxay ka Safar Lee!
Kathy • August 19, 2013 at 9:59 waxaan ahay • Reply
Si qurux badan oo si xoog leh ayuu yiri! Waad ku mahadsan tahay isagoo odhanaya, run!
MIMSHACH NADIIF • August 19, 2013 at 9:59 waxaan ahay • Reply
OK. waa waqtigii “heesaa Christian” inay ku kajamaan oo ay (adduunka) ilaah(shaydaan). ay sida fudud sida in.
Haddii aad u malaynayso in our Ciise la ixtiraam / majaajilooday ka dibna aad heesaa ku jira booska ugu wanaagsan ee ay sidoo kale ka abaalmarin ay shaydaan yaraa by aflagaado / ixtiraam la'aan shaydaan jidka adag laba jeer.
Dr. haabniim Utley • August 19, 2013 at 10:00 waxaan ahay • Reply
In aan kitaabkayga Rap iyo Diinta: Fahamka Ilaah Gangstas ah, Waxaan ku qori oo ku saabsan sida heesaa isku arkaan inay Ciise maxaa yeelay, isagu waa la dulmay sida ay yihiin. Baadhid. http://rapandreligion.com
Haa! Thanks for wadaago Dr. Utley! Waxaan maqlay aad ku hadasho ee Jaamacadda North Park dayrta la soo dhaafay oo ahaa saamaysay xiriir this.
Terence Ibraahim • August 19, 2013 at 10:00 waxaan ahay • Reply
Wow Dardaaranka…..Waxaan ku samayn mahad sida awood iyo xeelad aad erayada loo isticmaalo in lagu riday fikirkaaga marayo [muujinaysaa Dhadkan in aad quraarad :) ]…Waxaan doonayay inaan ra'yigooda la mid ah, aad dhabtii keenay Hufnaan galay mawduucan adigoo isticmaalaya tusaalayaasha wanaagsan.
Thanks mar kale,
MoNsTroSity • August 19, 2013 at 10:00 waxaan ahay • Reply
waxaa jiri ilaahyo badan iyo sayidyo badni. (1Co8:5) aHaYah Aasheer aHaYAH, U SHEEG reer Israa'iil WAAN AHAY baa idiin soo diray. (Ex.3:14) & weliba ku El of Ibraahim, Yitschak, n Yaacov (Ex.3:15).. YmmanuwEL, YesHaYAH HaMashiyach.
U soo ducee & akhriyo Kitaabka Quduuska ah ka daran iyo Kan Quduuska ah ee Israa'iil Wil daaha ka jawaabaha ka OUR Aabbihiinna jannada ku ART… Salvation oo Badbaadiyeheenna ah dib comin for ppl uu… “-Tobanka qolo oo Israa'iil” & kuwa rumeeyey WORD ee aHaYAH.. raadiso Yesha – Salvation sida maal qarsoon… ammaana aHaYAH – Kan WAA, Waxa uu ahaa, & Waxa uu kan imanaya. (Rev1:4) sidaas oo iman, YesHaYAH. Aamiin.
RJSALEZ • August 19, 2013 at 10:01 waxaan ahay • Reply
Sidaas waxa Ilaah uu si gaalnimo ah waxaad codsan? Waxaan idinku soo celin weydii, Waa maxay Mu'min ah oo aan Ilaah u ah? ;)
Empress • August 19, 2013 at 10:02 waxaan ahay • Reply
this runtii waa fariin weyn
iiwaxyooday in wax la qoro maanta, ma ha qaar ka mid ah dadka negative ama comments aad dhaqdhaqaaqdo ka ah runta ugu hadlayna. Waan ogahay in ay jiraan qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in ay isku dayaan si ay u helaan on dareemeyaasha. Waxaan halkaan u joogaa inuu ku yidhaahdo uun ku hay ilaa aad samaynayso kala duwan
Markii aan ahaa haddii ay dunidu, Waxaan ahaa enthusiast culus hip hop sababta oo ah hal-abuurka iyo farshaxanka iyo inta badan sababta oo ah content. Dhegeystayaasha ka dalbanayaan inay erayadayda in racfaan wadnaha. Sidaas, in nuxurka, Quluubtooda ilaa inta uu jiro wada madoobaan, waxaa jiri doona kuwa ka dalbanayaan in fariinta. Maqaalkani waxa uu kaliya u adeegta ogeysiis na on rumeeyey, maxaa yeelay, “waxaan loo sameeyay in ay u iftiimin ilaa magaalo ka mid ah on hilltop a” iyo waxaan rabnaa in dadka in ay naga dhuftay ilaa marka ay dareento lumay’ SO waannu ka eegi kartaa meeltobnaadka badbaadiye. Waxaad ku qeexan our mission kaliya in this article- thanx! P.S. Jeclaataa eegtahay CUP THE!!!! cabsado. Ilaah ha barakeeyo
Xusuuso: Mucaaradka Caanka ah Trip Lee Wadahadalo Ku Saabsan Rap & Diinta - HAA FM
Waan jeclahay habka fikirka ah Mr ah. Lee, Waxaan raacsane ah Trip ka boodi, Markii uu weydiiyay su'aasha ah “Sidaas sidee baan uga jawaabaan? Waxaan bilaabayaa yaabaa olole si ay qaadacaan oo ay music. Or, sida heesaa nafsaddayda, Waxaan qori kartaa rikoor hoyatay culus loogu talagalay da 'ah. Waxaan ha doonaa inaad go'aan ka gaadho in mid ka mid ah wajiyada kuwa midigta ama khaldan yihiin.” Waxaan qabaa in jawaab la record hoyatay ah waa mid aad ku haboon tahay, Waxaan u arkaan fursad ay ku sameeyaan si sax ah wixii Daa'uud sameeyey si Goli'ad. Oo isna wuxuu lahaa fursad ay ku afka kan hadlayay dhanka ah uu ahu xidhay. Haddaba la saamaynta iyo ahu siinayo Trip tayo cajiib ah uu leeyahay, Waxaan u arkaan fursad dahab ah inay ku dhex dhuuntaan Warshadaha ee.
Ilaahay ha barakeeyo laga yaabaa in- Blog Good!
Ilaah ku ammaanaan SOCDAAL GREAT!!!!!!